२१ पौष, २०७४ || प्रकाशित १०:४३:३८
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत गुमाएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बुधवारदेखि चुनावी हारको समिक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा जुटेको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला कुरा गर्दै गिरीले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउनुको रहस्य खोल्दै भने, ‘१५ अर्बको खेलमा ममाथि झेल भयो ।’
कमल थापा र दिलनाथ गिरी दुवै पञ्चायत व्यवस्थाको ‘मण्डले आन्दोलन’का अगुवा हुन् । राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डललाई त्यो बेला कांग्रेस र वामपन्थी विद्यार्थीहरुले मण्डले भन्थे । कमल थापापछि मण्डलको अध्यक्ष बनेका गिरी पछिल्लो संसदमा राप्रपाको प्रमुख सचेतक हुँदै मन्त्री बने ।
तर, थापाले एकाएक उनलाई मन्त्रीबाट मात्र होइन, पार्टीबाटै निकाल्ने गरी बैठकमै प्रवेश नदिएपछि हामीले उनलाई यसको कारण बुझ्न खोज्यौं । प्रस्तुत छ, गिरीसँग गरिएको कुराकानीः
तपाईलाई मन्त्रीबाट हटाउनुको कारण कमल थापासँग क्याबिनेट बैठकमा भएको विवादमात्रै कारण हो कि अरु केही छन् र?
ती ठूला चलवखेलहरु के हुन्, जनतालाई बताउनु पर्दैन र ?
बाहिर चर्चा यहि छ, कमल थापाले मलाई हटाएर शहरी विकास मन्त्रालय किन लिए रु त्यहाँ अबौर्ंका आयोजनाहरुबाट कमिसन लिने र आफू अनुकुल ठेकेदारलाई काम दिने योजना रहेछ । मैले त्यो योजनामा सहयोग गर्न सकिन । कमल थापा अहिले आफैं आउनुको कारण यहि हो । अहिले नै पाइपलाइनमा १५ अर्बको ठेक्का छ, त्यसमा मैले गलत गर्न मानिन ।
पार्टीलाई चुनावमा आर्थिक संकलन पनि गर्नु भएन रे नि र?
तर सरकारबाट मात्र होइन, तपाईलाई त पार्टीबाटै हटाइएको जस्तो छ । चुनावको समिक्षा गर्ने बैठकमै तपाईलाई उहाँले प्रवेश दिनुभएन होइन र?
चुनावको पराजयको समिक्षा गर्न तपाई निकालिनुभयो त र?
तपाईको मतलब कमल थापाले एजेण्डा छाडे, राजालाई पनि धोखा दिए भन्ने हो र?
अब तपाई के गर्नुहुन्छ त र?
यति नांगो रुपमा कमल थापा आइसकेपछि त्यहाँ बसेर केही अर्थ छैन । यो पार्टीमा उनीबाट तमाम साथीहरु पीडित छन्, कसैको पनि भविष्य सुरक्षित छैन । म जस्तो ४८ वर्षसम्म कमल थापासँग निरन्तर साथमा रहेको मान्छे सुरक्षित रहन सकिनँ भने अरु को सुरक्षित होला रु कमल थापाबाट साथीहरु आतंकित छन् । अब मेरो काम भनेको प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा राष्ट्रवादी, पशुपति शम्सेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग बसेर छलफल गर्छु । हामी एकजुट भएर अघि बढ्न नयाँ ढंगले जान्छौं । विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति पार्टीहरुसँग पनि छलफल गर्छौं । वृहत छलफल गरेर मुलुकलाई तेस्रो शक्ति दिनुपर्छ ।